Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoo.
CAFFEE - (Hagayya 02 Bara 2011) :
Kanaaf jedhan Addee Loomiin, gamaaggama manneen hojii waliin kurmaana kurmaanaan taasifnuufi raawwii hojiiwwan misoomaa, komiiwwan kenninsa tajaajilaafi gama bulchiinsa gaariin hawaasa biraa ka’an irratti hojjechuun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaa kenninee irratti hojjechuu qabna.
Hojii kana gahumsa barbaachisuun hojjechuuf Caffeen, miseensota Koreewwan Dhaabbiisaafi ogeessota ogummaan isaan deeggaran gahoomsuun cimanii akka hojjetaniif yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannoo olaanaan kan hojjetu ta'uu ibsan. Leenjiin dhimma hordoffiifi to’annoo irratti guyyoota lamaaf kennamu kunis qaama karoora kanaa ta’uu barbaachisummaa leenjichaa ilaalchisee haasaa taasisan keessatti ibsanii jiru Addee Loomiin.
Miseensota Koreewwan Dhaabbii 48 ta'aniifi ogeessota isaan deeggaraniif Magaalaa Adaamaatti leenjiin adeemsa hordoffiifi to'annoo itti gaggeessaniifi gahee isaanii ilaalchisee Yuunivarsitii Naannoo Oramiyaarraa Dr. Baqqalaa Lammiin kennamaa Jira.
Toorbee kana 23660
Ji'a kana 34372
2008 irraa eggalee 3885984